फोटो ग्यालरी – Page 71 – धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
सल्यानटार हुँ म धादिङको मुटु
बहुचर्चित ६ सय मेगावाट बुढीगण्डकी जलबिद्युत्त आयोजनाको कारण पछिल्लो समय निकै चर्चा र तनावमा रहेको धादिङको सल्यानटार । बुढीगण्डकी र नेत्रावती नदीको किनारमा रहेको सल्यानटार गाविस प्रस्तावित बुढीगण्डकी आयोजना बनेमा डुवानमा पर्ने हल्लाले स्थानीयवासीमा त्रास शुरु भएको छ । चैनपुर गाविसको सालवास उच्च माविको पछाडिवाट असार महिनामा..
बढ्दै छ शहरीकरण
बढ्दै छ शहरीकरण :धादिङ जिल्लाको सदरमुकाम धादिङबेसी शहरीकरणका कारण अहिले निकै व्यस्त र सांघुरो बन्न थालेको छ । नीलकण्ठ गाविसको सांखु भण्डारी गाउं नजिकैवाट देखिएको सदरमुकाम धादिङबेसी । केही बर्षयता सदरमुकाममा नयां घर वन्नेक्रम निकै बढेको छ । तस्बिर : एशोदा नेपाल /धादिङ न्युज डट..
अकबरे कि बंयरे ? पुर्बी नेपालको ईलाम जिल्लामा ब्यबसायिक रुपमा उत्पादन हुदैं आईरहेको अकबरे खुर्सानीलाई धादिङ जिल्लामा भने बंयरे खुर्सानी भनेर चिनिन्छ । झट्ट हेर्दा बंयर जस्तो देखिने भएकाले यसलाई बंयरे खुर्सानी भनिएको हो । तस्बिर : धादिङ न्युज डट..
सम्मान ग्रहण गर्दै धादिङका साहित्यकारहरू । सम्मान गर्दै अलि मियाँ लोकवाङमय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हनिफ मियाँ र प्रा.डा. रविलाल अधिकारी ।)
हाम्रो धादिङ /राम्रो धादिङ
दुइवर्षभित्रमा कारमा चढेर आकाशमा सररर
अबको दुइ वर्षभित्रमा कारमा चढेर आकाशमा उड्न सकिनेछ । विश्वको पहिलो उड्ने कार आउँदो दुइ वर्षमा बजारमा उपलब्ध हुने बताइएको छ । यो उड्ने कारको निर्माता अमेरिकी कम्पनी टेराफुजियाले सन् २०१५ को सुरु सम्ममा उड्ने कार बजारमा पठाइने बताएको छ । कम्पनीले यो उड्ने कारको मनै लोभ्याउने मोडेल समेत सार्वजनिक गरेको छ । कार र जहाजको वर्णशंकर जस्तो..